Mmelite NASA ọhụrụ na mwepụta na Docking nke SpaceX Crew-3 Mission
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mmelite NASA ọhụrụ na mwepụta na Docking nke SpaceX Crew-3 Mission
NASA na-emelite mkpuchi ya maka mmalite mmalite na ndochi na-abịa maka ọrụ ụlọ ọrụ SpaceX Crew-3 ya na ndị na-agụ kpakpando gaa ọdụ ụgbọ elu International. Nke a bụ njem ntụgharị nke ndị ọrụ nke atọ ya na ndị na-enyocha mbara igwe na SpaceX Crew Dragọn na ụgbọ elu nke anọ nwere ndị astronauts, gụnyere ụgbọ elu nnwale Demo-2, dịka akụkụ nke Mmemme Ndị Ọrụ Azụmahịa nke ụlọ ọrụ.
Mwepụta ugbu a bụ maka 1:10 am EDT Wednesday, Nov. 3, na SpaceX Falcon 9 rọketi si Launch Complex 39A na NASA's Kennedy Space Center na Florida, n'ihi na-adịghị mma ọnọdụ ihu igwe amụma amụma n'akụkụ ụzọ ụgbọ elu maka Sunday, Ọkt. 31, igba egbe.
A na-atụ anya na ọnọdụ ihu igwe dị n'akụkụ ụzọ mgbago ga-akawanye mma maka Wenezde, Nov. 3, mmalite, na amụma ihu igwe nke 45th na-ebu amụma ohere 80% nke ọnọdụ ihu igwe dị mma na saịtị mmalite.
Ndị na-enyocha mbara igwe NASA SpaceX Crew-3 ga-anọ n'ebe ndị ọrụ ụgbọ mmiri na Kennedy ruo mgbe mmalite ha. Ha na ezinaụlọ ha ga-anọrị ma nata nkọwa teknụzụ na ihu igwe n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ.
The Crew Dragọn Endurance a na-atụ anya ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu na 11 pm Wednesday, Nov. 3. Mwepụta na mkpuchi mkpuchi ga-adị ndụ na NASA Television, ngwa NASA, na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ụgbọ elu Crew-3 ga-ebu NASA astronauts Raja Chari, onye ọchịagha ozi; Tom Marshburn, onye na-anya ụgbọelu; na Kayla Barron, ọkachamara mgbasa ozi; yana ESA (European Space Agency) onye na-enyocha mbara igwe Matthias Maurer, onye ga-eje ozi dị ka ọkachamara ozi, gaa n'ọdụ ụgbọ elu maka ozi sayensị ọnwa isii, na-anọ n'ime ụgbọ ahụ ruo ngwụsị Eprel 2022.
Ọrụ Crew-2 na ndị na-enyocha mbara igwe NASA Shane Kimbrough na Megan McArthur, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Akihiko Hoshide, na ESA (European Space Agency) onye na-enyocha mbara igwe Thomas Pesquet ga-achọ ugbu a ịchụpụ ha n'ọdụ ụgbọ elu ahụ tupu Sunday, Nov. 7, ịlaghachi n'ụwa.
Oge ngwụcha agafeela maka nzere mgbasa ozi maka mkpuchi n'onwe nke mmalite a. N'ihi ọrịa coronavirus na-aga n'ihu (COVID-19), ụlọ ọrụ Kennedy Press na-anọgide na-emechi maka nchebe nke ndị ọrụ Kennedy na ndị nta akụkọ ma e wezụga ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi dị ntakịrị bụ ndị amaralarị. Ozi ndị ọzọ gbasara nzere mgbasa ozi dị site na izipu ozi-e: [email protected]
Mkpuchi ozi NASA SpaceX Crew-3 dị ka ndị a (oge niile ọwụwa anyanwụ):
Tuzdee, Nọvemba 2
• 8:45 pm - NASA Television mmalite mkpuchi na-amalite. NASA ga-enwe mkpuchi na-aga n'ihu, gụnyere mwepụta, ụgbọ mmiri, oghere oghere na emume nnabata.
Wenezdee, Nọvemba 3
• 1:10 nke ụtụtụ - Mwepụta
Mkpuchi TV NASA na-aga n'ihu site n'ọdụ ụgbọ mmiri, mbata na emume nnabata. N'ọnọdụ nnọkọ akụkọ ọhụrụ, ndị isi NASA ga -ekwu okwu n'oge mgbasa ozi.
• Elekere 11 nke mgbede - N'ọdụ ụgbọ mmiri
Tọzdee, Nọvemba 4
• 12:35 nke ụtụtụ - oghere oghere
• 1:10 nke ụtụtụ - emume nnabata
Ihe nkiri NASA TV
Mkpuchi ndụ NASA TV ga-amalite na 8:45 pm Tuesday, Nov. 2. Maka NASA TV downlink ozi, nhazi oge, na njikọ na nkwanye vidiyo na nasa.gov/live.
A ga -ebugharị ọdịyo naanị na nnọkọ akụkọ na mkpuchi mkpuchi na NASA “V”, nke enwere ike ịnweta site na ịkpọ 321-867-1220, -1240, -1260 ma ọ bụ -7135. N’ụbọchị mmalite, a ga-eme “ụda ozi,” ọrụ ngụgụ na-enweghị nkọwa mmalite NASA TV na 321-867-7135.
Mwepụta ga-adị na mpaghara onye na-amu amu VHF redio 146.940 MHz na UHF redio 444.925 MHz, ọnọdụ FM, nke a nụrụ n'ime Brevard County na Space Coast.
Weebụsaịtị webụsaịtị NASA
Mkpuchi mkpuchi ụbọchị nke NASA's SpaceX Crew-3 ga-adị na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Mkpuchi ga-agụnye mgbasa ozi ndụ yana mmelite blọgụ na-amalite n'oge na-adịghị anya karịa 10 pm Tuzdee, Nọvemba 2, ka ngụta ndị dị ịrịba ama na-eme. Vidiyo gụgharia nke achọrọ na foto mmalite a ga-adị obere oge ka ebuliri ya. Maka ajụjụ gbasara mkpuchi ngụkọ, kpọtụrụ ụlọ akụkọ Kennedy na: 321-867-2468. Soro mkpuchi ngụkọ na blọgụ mmalite na blogs.nasa.gov/commercialcrew.
N'ụbọchị mmalite, "nri dị ọcha" nke mmalite na-enweghị nkọwa NASA TV ga-agbasa na ọwa mgbasa ozi NASA TV. NASA ga-enye ndepụta vidiyo dị ndụ nke Launch Complex 39A ihe dịka awa 48 tupu ebuli elu nke ọrụ Crew-3. Na-eche nsogbu teknụzụ na-agaghị ekwe omume, ndepụta ahụ agaghị akwụsị akwụsị site na mmalite.
Ozugbo nri dị ndụ, ị ga-ahụ ya na youtube.com/kscnewsroom.
Gaa Launch fọrọ nke nta ka ọ bụrụ
Ndị otu ọha nwere ike ịdebanye aha maka ịga mmemme a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isonye na mmemme Facebook. Mmemme ọbịa ọbịa nke NASA maka ebumnuche a gụnyekwara akụrụngwa mmalite, ọgwụgwọ maka ohere ndị metụtara ya, yana stampụ maka paspọtụ ndị ọbịa NASA mebere (maka ndị edebara aha site na Eventbrite) na -eso mwepụta nke ọma.
Lelee, tinye aka na Social Media
Mee ka ndị mmadụ mara na ị na-agbaso ozi a na Twitter, Facebook, na Instagram site na iji hashtag #Crew3. Ị nwekwara ike nọrọ na njikọ site na isoro na ịkpado akaụntụ ndị a:
Mmemme azụmahịa nke NASA ewepụtala ebumnuche ya nke nchekwa, ntụkwasị obi, na ọnụ ahịa ụgbọ njem na-esi na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa site na United States site na mmekorita ya na ụlọ ọrụ nzuzo nke America. Mmekọrịta a na-agbanwe arc nke akụkọ ihe mere eme ụgbọ elu mmadụ site na imeghe ohere ịnweta orbit dị ala na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nye ọtụtụ mmadụ, sayensị karịa, na ohere azụmahịa karịa. Ọdụ oghere ahụ ka bụ isi mmalite nke NASA ga -amali elu na nyocha mbara igwe, gụnyere ọrụ ndị ọzọ ga -eme n'ọnwa na, n'ikpeazụ, na Mars.